Al-shabaab Oo Soo Bandhigay Ciidamo Ay Sheegeen Inay Ka Goosteen Dowladda Somaaliya -Sawirro
Saturday January 12, 2019 - 13:03:45 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Al Shabaab ayaa soo bandhigtay shan askari oo ay sheegeen in ay kasoo goosteen ciidanka Milatariga Soomaaliya ee ka howl gala degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan , kuwaa oo dhinacooda isku soo dhiibay.
Askartan oo ku labisnaa dareeska ciidanka Milatariga Soomaaliya sidoo kale watay qoryaha AK-47 ayaa lagu soo bandhigay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, waxa ayna sheegeen askartan in ay kasoo baxeen aaga degmada Maxaas ay joogeen.
Qaar kamid ah askartan lasoo bandhigay ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ee jooga Degmada Maxaas ay dhibaato badan ku hayaan dadka shacabka, waxa ayna sheegeen in ay go’aansadeen in Al Shabaab isku soo dhiibaan.
Sida lagu daabacay Warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa waxaa Goobta lagu soo bandhigaya askartaas la sheegay inay ka tirsanaayeen Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ku sugnaa Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Al-Shabaab ma sheegin Magacyada askarta ay sheegeen inay ka goosteen dowladda,isla markaana isku dhiibay,waxaana sidoo kale weli ka hadlin saraakiisha Ciidamada xoogga dalka ee Gobolka Hiiraan.
Al Shabaab ayaa marar badan soo bandhigtay askar ay sheegeen in xagooda usoo goosteen, Taliska Milatariga Soomaaliya ayaana inta badan ka hadlin ciidamada ay Al Shabaab ay sheegaan in ay kasoo baxeen milatariga xagooda isku soo dhiibeen.